UNICEF oo Dowladda KMG ah iyo Al-Shabaab ku eedeysay Askaraynta Caruurta. – SBC
UNICEF oo Dowladda KMG ah iyo Al-Shabaab ku eedeysay Askaraynta Caruurta.
Laanta Q,M u qaabilsan dhinaca caruurta ee UNICEF ayaa war bixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in dhinacyada isku haya Soomaaliya ay si weyn u askareeyaan caruurta yar yare e da’dooda ka yar tahay 10, ka sano.
Madaxa bad baadada caruurta ee UNICEF Isabella Kastrogiyafaani ayaa sheegtay in dhinacyada ku dagaalama Soomaaliya ee siyaasadda isku hayaay ku xad gudbaan xaquuqda caruurta waxayna ku eedeysay inay caruurta yar yar hubeeyaan oo ay dagaal galiyaan.
Isabella waxay soo hadal qaaday dhanka Xarakadda Mujaahidiinta Al-Shabab ay askareeyaan caruur yar yar oo ay waalidiintooda ka soo kaxeysteen kuwaasoo ay sheegtay inay ku lu lahaayeen dagaaladii ugu dambeeyay ee gudaha Soomaaliya ka dhacay.
Haweeneydaan waxay ku eedeysay Xarakadda Al-Shabab inay caruurta ka wataan dugsiyada xaafadaha iyo goobaha kale ee wax barashadda isla markaana ay u tababaraan inay dagaalo galaan.
Kastarogiyofaani waxay xustay in Al-Shabab inay caruurta siiyaan taleefoono nooca gacanta lagu qaato ah oo ay ku jiraan muuqaalo ay ku jiraan waxyaabo caruurta jecleysiinaya inay dagaal galaan.
Sidoo kale haweeneydaan UNICEF u qaabilsan bad baadada caruurta ayaa ku eedeysay dawlada KMG ee Soomaaliya inay iyana ku lug leedahay tacadiyada caruurta loo geysto isla markaana ay askarta dawlada ku jiraan caruur yar yar oo aan willi gaarin da’da qaan gaarnimada.
Waxay tilmaantay in dawladu laheyn xeer ay ku xulato da’ada dadka ay ciidan ahaan u tababaranayso taasina waxay keentay in caruur yar yar laga dhex helo ciidamada dawlada.
Q,M ayaa dhawr jeer ku cel celisay inay in dhinacyada isku haya Soomaaliya ay si weyn ugu tuntaan xaquuqda caruurta isla markaana ay caruurta u adeegsadaan dagaalada Soomaaliya.